Ahoana ny fampivoarana dofollow mety hanatsara ny tranokalako SEO?
Lasa sahiran-tsaina ny habetsaky ny tompon'ny tranonkala rehefa mitodika amin'ny dofollow sy nofolow backlinks. Efa mba nanontany tena ve ianao hoe inona ny fahasamihafana misy eo amin'izy ireo ary ahoana no ahafahan'izy ireo mampiroborobo ny tranokalan'ny tranonkala fikarohana? Raha tsy fantatrao ny fahasamihafana misy eo amin'ireo hevitra ireo, dia mety tsy manana fahalalana momba ny famatsiana ny sira mifandraika ianao. Antenaina fa hanaisotra ity tsy fahatokisana ity ny lesoka fohy nataonareo ary hanampy anareo handray fanapahan-kevitra amin'ny "tohiny" ny fichier rehetra misy anao.
Ny fiheverana ny saka sy ny tetikady fifandraisana
Alohan'ny hanombohantsika hiresaka momba ny fahasamihafana misy eo anelanelan'ny nonfollow sy ny fanarahana ny lalam-barotra dia avelao hijery akaiky kokoa amin'ny hevitra "jioka rohy" ary ahoana no ahazoanao izany na very.
Rehefa mandefa rohy mankany amin'ny tranonkala iray hafa ianao, mifidy ity pejy ity ary manoro ny mpanara-dia anao sy ny mpamaky hijery ity pejy ity mba hahazoana tsipiriany bebe kokoa. Google dia miahy ny traikefan'ny mpampiasa izany ka izany no antony ilanao ny hampifandray rohy amin'ny sehatra azo itokisana sy mendri-kaja izay misy ifandraisany amin'ny orinasanao manokana farafaharatsiny. Ny rohy avo lenta ho an'ny tranokala na bilaogy dia tena tsara. Ny kalitao avo kokoa amin'ny tranonkala iray mifandray aminao, ny vokatra tsara mety ho azonao. Tsy midika izany fa tsy misy dikany ny rohy mankany amin'ireo pejin-pejin-drakitra na sehatra vaovao. Ny fitaovam-pikarohana dia mametraka fijery be dia be, ary anisan'izany ny isan'ny backlinks azonao avy amin'ny pejy mifandraika amin'izany.
Aza mampiasa fifandraisana mivadika
Ny mombamomba ny tranonkala fananganana rindrambaiko tena ilaina dia tokony hotadidinina rehefa manangana ny rohy fananganana rohy fa ny isa rohy dia tsy manan-danja noho ny toetrany. Raha mbola tsy mifandray amin'ny lohahevitry ny pejinao ny rohy izay manondro ny tranonkalanao, dia heken'ny Google ho fanitsakitsahana ny lalàm-pananana ary ny sazy hahazoanao sazy. Ankoatra izany, mila manalavitra ny famoahana ny mpiara-miasa ianao amin'ny rohy amin'ny pejy hafa momba ny isan'ireo lohahevitra tsy misy ifandraisany. Raha mampiasa blôgy SEO ianao momba ny fanoratana, dia azo inoana kokoa fa mahazo sazy avy amin'ny fitaovam-pikarohana ianao, raha tsy ampiasainao nofollow ho an'ireo backlinks rehetra ireo.
Backlinks Dofollow sy backlinks noforovola
Raha toa ka mampihatra ny anarana nofollow amin'ny rohy ao amin'ny blôginao na tranokala ianao, Google dia tsy handefa sira mifandraika amin'izany rohy. Araka ity soso-kevitra ity, ny mpampiasa dia afaka mahita votoaty amin'ny tsindrio ity rohy ity, fa Google dia tsy manisa ity rindranasa ity ho toy ny fanamarihan'ny manam-pahefana. Amin'ny ankapobeny, tsy hita amin'ny fampiharana ny lisitry ny backlinks dofollow raha faly amin'ny Google ianao manaraka ny rohy mankany amin'ny pejy voatondro. Raha tsy tianao ny sira fifandraisana amin'ny alalan'ny piraofilinao, dia mila mampihatra ny toetra tsy voatanisa amin'ny rohy ianao.
Misy toe-javatra sasantsasany manokana amin'ny fampiasana ny nofollow attribute mety ilaina. Ny voalohany sy ny toe-javatra mahazatra indrindra dia rehefa mandoa vola ianao. Raha tsy mampiasa rohy nofollow ianao, amin'ity tranga ity dia mety hitarika anao amin'ny fisitram-pihom-panambadiana i Google ka hampiato ny fidirana amin'ny tranokalanao.
Izany toe-javatra izany dia rehefa voavidy ho mpitoraka blaogy ianao hamoaka lahatsoratra ao amin'ny blôginao. Ireo rindran-damilosana amin'ny lahatsoratra manokana dia tokony hanana toetra nofafana. Ny Google dia manaiky rohy sy rohy mandoa amin'ny lahatsoratra voarakitra ho toy ny rohy mitovy. Ireo tranonkala mirotsaka amin'io asa io dia mety hahazo sazy. Izany no antony maha-ara-dalàna ny fampiasana ny nofollow ho azy ireo.
Ny rohy affiliate ihany koa dia tonga amin'ny dokambarotra dokam-barotra amin'ny backlinks. Mihevitra azy ireo ho toy ny dokam-barotra izy ireo. Izany no mahatonga anao hanao nofafana Source .